Kudiwa nokuita kubatana pakati ouinjiniya mumatunhu Mapaipi kunoitika uye kana Shim wokutanga uye panguva kugadzirisa mashandiro. Feature nyere nomoto pakukurukurirana gadziriro kunodiwa nechokwadi tightness. Chete zvisingawanzoitiki kacho, izvi hazvisi kukosha, uye chinogona dzisaitwa. Uchitsvaka mhinduro yomubvunzo wokuti sei kuti weld chubhu kuti chubhu, haagoni kuita pasina tsanangudzo michina ano. Chokutanga, izvi zvinoshanda epurasitiki zvinhu izvo kwete kare, dzinowanda pamisika uye nokukurumidza kuisa kushanda nzira itsva vanomhanyisa yakatesvera panyanga dzacho. Asi chinyakare mapaipi simbi welded pamusoro ano uye yakagozha pamwero pane shure 10-15 makore.
Ndezvipi mhando senyere zvinogona welded?
The yose-siyana mutopota zvokunyama, iro rinoshandiswa mvura mugadziriro, gasi wedzerai uye kudziyisa chinogona kukamurwa nezvemarudzi maviri zvinhu - resimbi uye epurasitiki zvigadzirwa. Muzviitiko zvacho zvose, basa chubhu weldable, kana kugadzwa navo zvaisazobvira. Chokwadi, sezvo imwe nzira, ungayeuka mashoko Threaded kubatana nzira, iyo yaimbonzi kushandiswa zvakaoma pakurapa sesimbi zvivako, asi nzira iyi nderechinyakare uye kwete kushandiswa. Mazuvano nomoto pamusoro mapaipi hwendarira anoitwa dzemagetsi mano, hunoita kuti pave majoini simba. Dzakasiyana Michina anoshanda pombi epurasitiki. Panyaya iyi dambudziko kunokonzerwa nokushandisa dzekare nomoto softness uye viscosity mashoko mamiriro. Naizvozvo, pokunamatidza nzira inoshandiswa uye utsotso, izvo zvinosanganisirwawo mukuru boka nomoto michina. Panguva iyo hwokugadzira nzira pakutevedzera zvakadaro marudzi yeimwe akasiyana chaizvo zvetsika nomoto michina.
The inonyanya kufarirwa mudziyo nokuda yemagetsi riemukaari nomoto pamusoro mapaipi simbi iri Semi inverter mhando. In oparesheni, kudzivirira kushanda munzvimbo kubva Kufurirwa nevamwe hunokosha gasi rinoshandiswa, izvo zvinoita kuti vabudirire yakakwirira mwero zvakarurama uye tightness ari musono. Kuderera kukurumbira mano kuti Chinyorwa chinhu chakakombama Welding MMA. It is risingadhuri uye nyore nzira kubudisa weld panguva mukuru mufambo zvokushandisa, asi ine zvinokosha zvainovhiringidzawo, kusanganisira pasi zvibereko uye paumbwe gang pamusoro weld pamusoro kuti zvinofanira kubviswa. Kana Nzira nomoto pamusoro epurasitiki zvinhu, zvikuru inowanzoshandiswa hurongwa kuti kudzvanya yakatesvera panyanga dzacho. Uye ano polypropylene chubhu, uye muenzaniso polyvinylchloride soldered mune muchina ane azvikuya aricheke design, inonakidza vise ndiro nokuveza (kudziyisa chaikosha) uye zano nokuda jointing.
Kugadzirira simbi sepombi kuti nomoto
Zvikwepa nokungwarira sanded kuti kunonyanyisa kukodzera nomumwe. mativi ose anofanira kuva pasi chamfer dzinongoda pa 45-dhigirii yorusvingo hama kuti chubhu akabatana. Muchiitiko ichi vanofanira kuramba sandara chiso upamhi dzinenge 2 mm. Zvisinei, chaizvo parameters dzingasiyana zvichienderana nomutopota dhayamita. No kukosha ndiwo mubvunzo sei kuti weld kuti chubhu kuti mutopota, yakarurama kuurayiwa zviri kunangiswa. Pakarepo pamberi oparesheni zvakakodzera kuti pave neungano - kuti nechokwadi kunonyanyisa rakarurama iri rutapudzo pakati micheto miviri kuurongwa anofanira welded. Mune zvimwe zviitiko, akaurayiwa chipini, kuti inoumbwa pfupi musono kuti panguva ungano anoita ndiro magadzirirwo.
Electric nomoto simbi sepombi
Chekutanga zvose zvakafanira kuita inoti "pasi." The waya anofanira hazvo nevamwe uye vakavharirwa mune chaiyo wokuisira. In chakanamwa nomoto midziyo unoiswa optimum ano simba rokuti waida kuti imwe pfuma, - avhareji zvinodiwa kuti nyoro alloys, uye nani kuti mukuru chiwanikwa steels. Uyezve clamped chinhu chakakombama electrode uye akaisa pasi 60-dhigirii yorusvingo hama kuti workpiece. Kubva pfungwa iyi pamusoro riemukaari nomoto anotanga kushanda hukawanika pamusoro sepombi simbi, izvo zvinogona pamwe paumbwe pezvitsiga. The electrode zvinofanira kuzununguswa zvishoma nezvishoma, asi kuitira kudzivirira isanamira. Kana kunonoka panzvimbo ariwo ngozi kuwana chinhu kunyanya deformation. Dzivisa ichi zvinobvumira yunifomu akabata chinhu chakakombama pamusoro pemvura. Somugumisiro, vanofanira kuumba hwakasimba Wavy musono.
Kugadzirira nomoto kuti pombi epurasitiki
sepombi First dzinobviswa kuti kukura maererano ine zvakakwana Kureba vakaronga mamiriro. Kureva, zviri chinodiwa kuronga mukuru gungano kwacho zvokuti nomoto waiva chokupedzisira ikabatwa. Izvi realizable kwete nguva dzose, asi kana zvichibvira, ose hwokugadzira basa kuti Mapaipi rokuita nomoto mabasa. Kuchavawo hapana kupfuura chengeta chiduku wedzerai chikamu chigadzirwa inogona chakaunzwa wakakodzera. Zvadaro, sezvo iri nyaya simbi analogs, polyvinylchloride uye polypropylene pombi vari nguo. Huru basa panguva ino - kuwana kumeso, zvakachena uye zvakarongedzwa kumicheto. The chatingatevedzera micheto ari chubhu kunoenderana rakavimbika yemberi musono. Izvi zvinoshandawo kunyanya kune epurasitiki zvigadzirwa, sezvo zvinyoronyoro marongerwo chidukuduku cheek uye hadzina kufambiswa zvakanaka zviri zvikuru muna pokunamatidza kwacho.
Zvikwepa remubatanidzwa chikweshe
Zvivako Large nokuti nomoto pamusoro epurasitiki pombi kazhinji vane wakaiswa chokugadza vakwanise mu-mutsetse muoti kuumba mapfundo. Zvishoma akaoma pezvakaitwa yaitwa imwe-nguva pokunamatidza kushandiswa. Zvinangwa dzakadaro Handheld namano anoshanda kudziyisa zvinhu dziri mokugezera. Asati kunoshandisa muchina inofanira kuiswa iri sandara penyika, uye akaisa optimum tembiricha. Somuenzaniso, nomoto pamusoro PVC mutopota inowanzopiwa akaziva pasi ezvinhu ose 260 ° C. Pashure 10-15 min. pashure nokuchinja pamusoro chiridzwa raundi Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri tembiricha mamiriro, zvichiita kuti itange kushanda.
Akatasva ari kamwene kusvika workpiece mukomboni - zvakakodzera pazvinhu mandrel, uye ruoko akatasva nyere. The oparesheni pacharo kunoitika mumaminitsi mashoma, sezvo mapurasitiki ikanyauka nokukurumidza. Naizvozvo, unofanira kuva pashure nokuchinja pamusoro mudziyo akagadzirira kupedza muitiro. Direct nomoto Zvikwepa PVC akatevera remubatanidzwa anogadzirwa kubva pakutanga muna imwe chiito. Haukwanisi tenderera, uye kuedza kugadzirisa zvichiguma pejoinhi okutanga mumasekonzi shoma, sezvo paine kuchinja pashure nomoto sei simba zvakaipisisa.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti atonhodze pasi mashoko?
Kana mapaipi zvesimbi kwacho kunoda refu uye kazhinji kuitwa akaturikidzana achiumba pejoinhi. Naizvozvo, kuti mamiriro ari kuwana simba mukufamba dzebhizimisi mabasa. Mushure kushanda zvakakwana kumirira kusvikira mhesano nzvimbo zvichitonhorera zvoga. Maminitsi mashomanana tinofanira kumirira kana ukaita nomoto kuti mutopota majoini dzakagadzirwa epurasitiki. Zvichienderana pakukora yacho uye nomoto kudzama penguva iyi Ingasiyana kubva 3 kusvika 20 maminitsi. Zvakakosha kuziva kuti kushanda simbi uye mapurasitiki zvinhu pamwe pokunamatidza zvinoreva hazvigoni kushandiswa kuwedzera kutonhora kwacho.
Sei weld nenyere kuna nenyere kuti zvikamu zvakasiyana?
Dzimwe nguva, vamwe chikonzero, nokuda kujairika STRUCTURAL kuurayiwa Mapaipi, tinofanira kubata muzvikamu zvakasiyana. Somuenzaniso, kungava kwakanaka pavanoparidza chaiwo dzeraundi chubhu uye preform ane zvivharwe chikamu. Panyaya iyi, mutopota iri welded kune zvatinosiita nharaunda umo pasherefu upamhi rinoenderana nharaunda yacho denderedzwa. The oparesheni rinoitwa chete chete pasherufu. Next sepombi vane zvikamu zvakasiyana chakanamwa nomoto riemukaari kuvesa zvemichina rinopa pamusoro mukobvu zvinhu. By redistributing akaumba welded simbi remubatanidzwa zvinofanira kuitwa pamusoro yose pamwe nzvimbo - zviri pachena kuti iyi nyaya zvichava yakakura kupfuura mwero nomoto.
New Michina kuchaita hureruke chakanamwa nomoto akasiyana zvinhu, kuwedzera zvikuru mikana naro. Nhasi, nyaya pamusoro sei weld kuti chubhu kusvika chubhu chaizvoizvo hapana michina nezvatisingagoni. Arc nomoto Somuenzaniso, kunoita kuti kushanda zvose zvinhu zvinoshandiswa kwete chete mudzimai asiwo maindasitiri zvekutepfenyura. No zvipingamupinyi nokuti purasitiki mutopota yokugadza, riri nyore kubatanidza mano kuti pokunamatidza.
Third-23 - Interceptor, haana kuiswawo pakati nyaya
Chemical indasitiri munyika. Pfupiso yebhuku
Furnace mafuta serimwe rinogona kutsiva chinyakare kudziyisa
Tank T-95 "Black yeGondo" - wokupedzisira shoko Russian muchiuto midziyo
The unrefined mafuta sunflower yakasiyana nemamwe muriwo mafuta
Silk jira - rakanakira kusona pezvinhu izvi
How kutanga zuva rako kuti nerubatsiro simba nokuda zuva mberi?
Muenzaniso wezviitiko zvakanaka pamhuri yevadzidzisi
Kurovedza nokuda cellulite pamusoro papa uye makumbo. Kuvhiringidzwa anopa chete hurongwa!
Windows 7. Test muoti: zvose
Digital Camera Nikon D300S: User manual, setup uye wongororo kuti nyanzvi
Rubatsiro wokutanga poizeni
Daniel Pennac: Biography uye mabasa
Chinzvimbo - haisi nguva chikwata, uye chikuru cho mabasa
Cuticle Remover - nyore uye nyore
Nzira yekuita sei kadhi reBanki rekuchengetedza? Iyo nzira yekugadzirisa uye mapoka emaroto
Achiziva zvokudya: zvinokosha zvinotaurwa. Ndinofanira pachigaro kudya?